Ikhaya leHolide eliNgcono eHirtshals elineWhirlpool yabucala
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguFrida - DANCENTER
UFrida - DANCENTER unezimvo eziyi-232 zezinye iindawo.
Indlu yeholide ebekwe kwindawo evulekileyo, enenduli yenduli kwindawo ebukekayo yeTornby Strand. Nge-m2 eninzi kunye nokusetyenziswa kakuhle kwendawo, indlu ibonakala ivulekile kakhulu. Inekhitshi / igumbi lokuhlala elikwimbono evulekileyo, amagumbi okulala amathathu onke anokufikelela ngokuthe ngqo kwithafa, i-mezzanine enebhedi ezimbini kunye neTV kunye nesidlali seDVD. Kubantwana kukho iPlayStation3 kunye nebhola ekhatywayo yetafile. Igumbi lokuhlambela eline-swirlpool. Kukho i-terrace evaliweyo kunye nevulekileyo. Indlu i-insulated kakhulu kwaye ixhotyiswe ngesitovu sokutshisa iinkuni kunye nempompo yokufudumala yomoya ukuya emoyeni, okunciphisa iindleko zamandla zibe ncinci. Ukuhlobisa kukukhanya kwesitayela se-cottage yaseDanish. Ifanitshala yeyanamhlanje kwaye incasa kwaye ihambelana nokuhombisa. Ngenxa yeefestile ezinkulu, ukukhanya kunokukhanya ngokukhululekile endlwini, ukwenzela ukuba ukuhlala apha nanini na unyaka kumnandi. Umnini unesandla esiqinisekileyo kunye neliso lomgangatho kunye nokusebenza okufezekisiweyo okukholisa kakhulu kunye nendlu ekhangayo kakhulu. Isakhiwo siyindawo yengqumba yentlabathi evulekileyo elungele imisetyenzana yangaphandle efana nokutshiswa lilanga, ukudlala nabantwana okanye ukonwaba ngokujikeleza igrill ngorhatya. Ukungena simahla kwipaki yamanzi.
Uyilo: ikhitshi evulekileyo (i-cooker (umbane), ihood, umatshini wekofu, i-microwave, i-dishwasher, ifriji, isikhenkcisi (60-99L), umatshini wokuhlamba), Igumbi lokuhlala / ibhedi (iTV(isathelayithi, itshaneli zeTV zaseJamani, iziteshi zikamabonakude zaseDanish (DR1) kunye ne-TV2)), isitovu(inkuni), isidlali-DVD, isidlali-CD, iyunithi yestereo), igumbi lokulala(ibhedi ephindwe kabini), igumbi lokulala(ibhedi ephindwe kabini), igumbi lokulala(2x ibhedi eyodwa), igumbi lokuhlambela(ukufudumeza umgangatho)(ibhafu okanye ishawari, isitya sokuhlambela , indlu yangasese), igumbi lokuhlambela(igumbi lokufudumeza umgangatho)(isitya sokuhlambela, indlu yangasese), ikhompyutha yomdlalo, iwhirlpool(yabucala, yangaphakathi, into yokufudumeza, iza kuchithwa, abantu aba-2), iterrace, iterrace(enophahla), izixhobo zokudlala, ibhola yetafile, umoya ukuya impompo yobushushu bomoya
Umbuki zindwendwe ngu- Frida - DANCENTER
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hirtshals